दाइ पत्रकारिता र कमरेड पत्रकारिता ः प्रेस स्वतन्त्रता ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
दाइ पत्रकारिता र कमरेड पत्रकारिता ः प्रेस स्वतन्त्रता !
२०७० चैत्र ४, मंगलवार ०३:१५ गते
एक दिन बिहानै चिनजानका एक जना दाइले फोन गरे ः
‘भाइ, तपाईं त पत्रकारितामा जमिसक्नुभयो, टिभीमा सधैँ देखिनुहुन्छ, ठूला–ठूला मान्छेलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । भाइ, टिभीमा देखिँदा खुब खुसी लाग्छ ।’
अरु केही नबोली मैले धन्यवाद दाइ मात्र भनेँ । उनले लगातार मेरो प्रशंसा मात्रै गरिरहे । प्रशंसा अलि बढी नै हुन थालेपछि मलाई दाइको प्रशंसामा कुनै स्वार्थको गन्ध आउन थालेको महसुस हुँदैथियो । त्यतिकैमा उनले आफ्नो कुरा सुरू गरिहाले ः
‘भाइ, सुन्नु न । त्यो मोरो श्यामे (नाम परिवर्तन) सारै बिग्रियो भन्या । कलेज त जान्छ, पढ्छ कि हल्लेर हिँड्छ, थाहा छैन । सँगैका साथीले कत्ति प्रगति गरिसके, त्यो भने जस्ताको तस्तै । यस्तै हो भने बिग्रिएरै जाने भो । यसलाई सुधार्नु प¥यो भाइ, तिम्रो पनि त भाइ हो नि ।’
म धेरै बोलिनँ, यत्ति भनेँ– ‘हो नि दाइ ।’
उनी फेरि बोले– ‘यसको पढाइ कत्ति गतिलो भएन, बरू तपाईंका तिर यस्सो समाचार खोज्ने, अर्ने काम मिल्दैन भन्या ?’
अल्लि अघि मलाई स्वार्थको गन्ध आइरहेको थियो । कुरो मिल्यो र मैले बुझेँ, भाइलाई बिग्रनबाट बच्न दाइको पहिलो प्रयास विद्यार्थी राजनीतितिर धकेल्ने अनि दोस्रो प्रयास पत्रकारितातर्फ रहेछ ।
नेपाली पत्रकारिताको अहिलेको अवस्था यस्तै–यस्तै हो । दाइसँगको कुराकानीपछि म धेरै बेर घोत्लिएँ– ‘म सञ्चारगृहमा छु कि सुधारगृहमा !’ धेरैको बुझाइमा नेपालका सञ्चारगृह युवालाई सुधार्नका लागि खोलिएका सुधारगृह मात्र हुन् । बिग्रिएका छोराछोरी र आफन्तलाई मिडियामा घुसाइदिन पाए सुध्रन्थे भन्ने आशा धेरैको रहेछ । पत्रकारिता विषयकै अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक ज्ञानका साथ यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । अझ, मोफसलका सञ्चारगृहहरुमा त भेटिनै गाह्रो पर्छ । प्रायः सञ्चारगृह हाँक्नेहरु सम्बन्धित विषय पढेका भन्दा परेका छन् । पत्रकारिताबाहेकका विषयमा योग्यता बनाएका र लामो समय यस क्षेत्रको अनुभव बटुलेका केही छन् । केही यसलाई स्थायी बनाउने प्रयत्न गर्दैछन् भने केही अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म यसमा रमाउन चाहन्छन् । केही दिन रमाउन चाहनेलाई सञ्चारगृहले राम्रै प्लेटफर्म दिइरहेको छ ।
यहाँ यतिविधि भूमिका बाँध्नुको पछाडि केही मह¤वपूर्ण कुरा छन् । नेपाली पत्रकारिता यही ढंगले कहिलेसम्म अघि बढ्ला ? यहाँ उठाउन खोजिएको विषय यो हो । चार लाइन समाचार लेख्नकै लागि पत्रकारिता कि पत्रकारिताको मूल मर्मलाई गिर्न नदिने गरी पेसागत धर्म निर्वाह गर्नुलाई पत्रकारिता भन्ने ? यसलाई बहसको विषय बनाइनु आवश्यक छ । के अहिले हामीले गर्दै आएको शैलीको पत्रकारिता नै यस क्षेत्रलाई हाँक्न सक्ने शैलीको पत्रकारिता हो ? होइन भने यसलाई सुधार्ने उपायको खोजी गर्ने हामीले नै हो । नेपाली पत्रकारिता जगत्ले आजका दिनसम्म प्राप्त गरेको सफलता र असफलता मुख्यतया पत्रकारिताको विषयमा सरकारले तय गरेको नीति, कार्यान्वयन र अनुगमन, सञ्चारकर्मीका लागि तोकिएको सेवासुविधासँगै पत्रकारहरुको अहिलेसम्म भूमिकामा निर्भर छ । मैले बुझेअनुसार पत्रकारितालाई व्यवस्थित बनाउने पनि यिनै विषयमा सुधार गरेर हो ।
इजाजतमै कडाइ ः
अहिलेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम स्थापनाको मापदण्ड अत्यन्तै सहज हुनुलाई पत्रकारिता जगत् अव्यवस्थित हुनुको मह¤वपूर्ण कारण मान्न सकिन्छ । पत्रिका, टेलिभिजन र एफएमको इजाजतपत्र जोकोहीले पहुँचको आधारमा तुरून्तै प्राप्त गर्न सक्छ । पहुँच नहुनेका लागि पनि इजाजतपत्र पाउन धेरै गाह्रो छैन । च्याउसरी उम्रिएका सञ्चारसंस्थाहरुले जन्माएका पत्रकारहरु कत्तिको स्तरीय छन्, उनीहरुले सरकारले तय गरेका मापदण्डलाई कत्तिको पछ्याउँछन् र सञ्चालकहरुले पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् ? भन्ने कुरा सबै छर्लङ्ग छ । अनि, यससँगै वर्षा यामको भेलसरी खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाली पत्रकारितालाई कसरी अगाडि बढाऊलान् भन्ने विषयमा पनि गम्भीर ढंगले मनन् गर्नु आवश्यक छ । सञ्चारसंस्था दर्ता गर्दा उनीहरुको भविष्यको पूर्वानुमान गर्नसक्ने कुनै आधार तय गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई पहिलो महिनाकै तलब दिन नसक्ने सञ्चारसंस्थालाई इजाजतपत्र दिनुको अर्थ के छ ? इजाजतपत्र दिँदै गर्दा सम्बन्धित निकायले कम्तीमा पनि निश्चित अवधि तोकेर सो अवधिभर सञ्चालनका लागि आधार माग्न सक्नुपर्छ । त्यो आधार प्रस्तुत गर्न नसक्नेले अबका दिनमा इजाजतपत्र पाउनुको अर्थ छैन ।
नेपालमा सञ्चारसंस्थाको संख्यात्मक वृद्धि आवश्यक छैन, नियमन गर्ने निकायले अब गुणात्मक वृद्धिका लागि नीति बनाउनुपर्छ । पत्रकारिताको इज्जत बढाउन पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ । यसका साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन मर्जरको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । संख्यात्मक रुपमा मात्र वृद्धि भएका बैंकहरुलाई मर्जरको नीतिले व्यवस्थित पारेजस्तै सञ्चारसंस्थाहरुलाई स्तरीय बनाउँदै पत्रकारिताको उचाइ कायम राख्न अबका दिनमा आपसमा गाभिने र सबैखाले सञ्चारसंस्थाका लागि दिइने इजाजतपत्रमा कडाइ गर्नुको विकल्प छैन ।
स्वतन्त्रताको लडाइँ ः
हामी पत्रकारहरु स्वतन्त्रताका कुरा धेरै गर्छौं । सरकारसँग हाम्रो पहिलो माग स्वतन्त्रता नै हो । निश्चय नै हाम्रो पहिलो लडाइँ लोकतन्त्र र पेसागत स्वतन्त्रताकै निम्ति हो । तर, पेसागत स्वतन्त्रताका लागि यो लडाइँ लड्दै गर्दा हामी आफैँमा स्वतन्त्र हुन सक्यौँ कि सकेनौँ ? यस विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ला । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विभिन्न पक्षबाट अवरोध हुनसक्छ । नेपालको सवालमा विशेष गरीकन राणाकालीन अवस्था, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाहकालीन अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा राज्यका तर्फबाट गम्भीर असर पर्ने गर्दथे । तर, अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र ढंगले सोच्ने व्यक्तिको अधिकारलाई अमूक राजनीतिक दल र उनीहरुका सिद्धान्तले अवरोध गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक, कुनै समूह तथा संगठनका विचारले पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छन् ।
नेपालमा राजनीतिको प्रभाव र असर हरेक क्षेत्रमा छ । सामान्य बोलीचालीमै पनि भन्ने गरिन्छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको सिद्धान्तलाई पक्षपोषण नगर्ने पनि मान्छे हुन्छ र ?’ यसलाई सिद्धान्त नभएको पनि मान्छे हुन्छ र ? भनेर प्रश्न उठाउने चलन छ । सामान्यतया मान्छेमा राजनीतिक चेतना हुनैपर्छ । तर, हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढ्ने मात्र हो भने देशमा राजनीति त रहला, बाँकी सबै अपाङ्ग हुने डर रहन्छ । हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक दलको प्रभाव स्वतन्त्रताका हिमायती भनिएका पत्रकारमा पनि उत्तिकै छ । निर्वाचनताका देख्न पाइन्छ, वास्तविक पत्रकारिता के हो र पत्रकारिताभित्र लुकेको व्यक्तिका स्वार्थहरु के–के हुन् ? त्यतिबेला सोध्न मन लाग्छ, हामी स्वतन्त्रताका लागि कोसँग लडिरहेका छौँ र के आधारमा तिनै राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गर्ने सरकारसँग हामी स्वतन्त्रता माग्दैछौँ ? कतै हामी ‘स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दलाई मागिखाने भाँडो त बनाइरहेका छैनौँ ?
कुनै व्यक्तिले तबमात्र स्वतन्त्रताको महसुस गर्छ, जब ऊ आफूभित्रै स्वतन्त्रता फेला पार्न सफल हुन्छ । स्वतन्त्रता कुनै समूह, संगठन वा दलविशेषसँग बाँधिदैन । आस्था र बन्धन छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । स्वतन्त्रताको माग गर्नेले आस्था राख्न सक्छ, बन्धनमा बाँधिन सक्दैन । नाकमा नत्था लगाएर बाँधिएपछि स्वतन्त्रता आफैँ पतन हुन्छ । बन्धनमा बाँधिएर मागिएको स्वतन्त्रताको नारा त्यो अवस्थामा स्खलित हुन्छ, जुन दिन हामी उनकै कार्यकर्ता बनेर उनीहरुसँगै स्वतन्त्रता माग्दै सडकमा उत्रन्छौँ । राजनीतिक दलहरुले पत्रकारका रुपमा भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा बढी चिन्न थालेपछि हामी कसरी पत्रकारको नाममा स्वतन्त्रताको लडाइँमा होमिन सक्छौँ ?
पत्रकारको लडाइँ स्वतन्त्रताका निम्ति सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग हुनुपर्ने हो । तर, यसको ठीकविपरीत एउटा दलप्रति आस्था राख्ने पत्रकारको संगठनको लडाइँ अर्को दलप्रति आस्था राख्ने संगठनसँग केन्द्रित बन्न पुग्यो । कुनै पनि दलप्रति आस्था नराख्ने र कसैको सदस्यता नलिएकालाई पत्रकार नै होइन भन्न थालियो, अझ नपुंसकको बिल्ला लगाइयो । परिणामस्वरुप पत्रकारितामा राजनीतिक दलहरु हाबी भए । ‘दाइ पत्रकारिता’ र ‘कमरेड पत्रकारिता’ले प्रश्रय पायो । तर, हामीलाई हेक्का भएन कि पत्रकाररुपी खोल ओढेर जब विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने माध्यमका रुपमा आमसञ्चारलाई प्रयोग गर्छन् र श्रमजीवी पत्रकारिताको कुरा गर्छन्, तब आमनागरिकलाई ठम्याउन कठिन हुन्छ कि पत्रकारिता वास्तवमा कस्तो पेसा हो ?
निर्वाचनताका सामाजिक सञ्जालमा एक जना साथीले मलाई प्रश्न गरे ः
तपाईं पत्रकार होइन ?
मैले जवाफ फर्काएँ ः
अर्को प्रश्न आयो ः
तपाईं कुन पार्टीको पत्रकार ?
मैले मजाकमा उत्तर दिएँ ः
काठमाडौँतिर भएको भए क्षेत्रपाटीतिरको हुन्थेँ होला, चितवनमा त पुर र चोक नै बढी छन् ।
अर्को प्रश्न ः
मैले साँच्चै सोधेको सर, मेरो एउटा कार्यक्रममा निम्तो दिनुथियो । तपाईं फलानो पार्टीको जस्तो लाग्यो र सोधेको । अरु पार्टीका पत्रकारलाई नबोलाउने कुरा भाको छ ।
मैले भनेँ ः
धन्यवाद सर । तर, आजको दिनसम्म म कुनै पार्टीमा छैन । तपाईंको निमन्त्रणमा म पर्दिनँ, सायद ।
यो कुराकानीले फेरि एक पटक झस्क्यायो । समाजले पत्रकारहरुलाई कुन रुपले बुझेको रहेछ, म छक्क परेँ । पत्रकार एउटा जात भन्ने सोच्ने गरेको मलाई त्यो दिनबाट पत्रकार त धेरै जातका हुँदारहेछन् भन्ने जानकारी भयो । कांग्रेस पत्रकार, एमाले पत्रकार, माओवादी पत्रकार, मधेसी पत्रकार, जनजाति पत्रकार यस्तै–यस्तै धेरै थरीका पत्रकार रहेछन् नेपालमा, त्यो पनि सांगठनिक रुपमै । व्यावसायिक हित, मर्यादा र मूल्यांकनको कसीमा उदाहरण बन्नुपर्ने पत्रकारहरुको यतिविघ्न राजनीतिक लडाइँ पक्कै पनि चौँथो अंगका लागि अभिशाप हो । राजनीतिक दलको झन्डा बोक्दै स्वतन्त्र पत्रकारिता गरेको धाक लगाउने पत्रकारहरुको भविष्य लामो रहन्न । कि त आमनागरिकको आँखाबाट गिरेर ‘म पत्रकार नै हो’ भनेर हिँड्न सक्नुप¥यो, नत्र भने पत्रकारभन्दा नेता नै बने भविष्य सुनिश्चित होला । होइन भने, पत्रकारका नाममा अघोषित राजनीतिकर्मी बनेर पेसामा कलंक थप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, यस्तो पत्रकारिता अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिताभित्र पर्दैन ।
केही महिनाअघि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले एक कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक पत्रकारिताका विषयमा लामै चर्चा गरे र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको उदाहरण दिँदै यो यहाँ पनि धेरै दिन चल्न नसक्ने विश्लेषण प्रस्तुत गरे । वास्तवमा मैले देखेको पनि यही हो । विश्वमा राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर गरेको पत्रकारिता दिगो हुन नसकेको उदाहरण हामीले पनि पढे सुनेका छौँ । नेपालमा पनि सधैँ राजनीतिक पत्रकारिता चल्न सक्दैन । व्यावसायिक पत्रकारिताको विकल्प छैन । नेपाली पत्रकारिता राजनीतिसँग जोडिएकैले अस्थिर राजनीतिको प्रभावस्वरुप यहाँको पत्रकारिता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन ।
घोषित तरिकाले दलहरुले मुखपत्रका रुपमा पत्रिका निकाल्ने स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै अघोषित रुपमा पत्रिकाहरु चलाएर पत्रकारहरुको बद्नाम गर्ने काम गरिरहेका छन् । अबको पत्रकारितामा दाइ, कमरेड पत्रकारिता तथा व्यावसायिक, स्वतन्त्र पत्रकारिताका बीचमा धु्रवीकरण आवश्यक छ । पत्रिकाको माध्यमबाट राजनीति गर्न चाहनेले घोषित रुपमै चलाउने र राजनीतिबाट बिल्कुलै अलग रहेर पत्रकारिता चाहनेले मात्र व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको वकालत गर्नु समग्र पत्रकारिता जगत्कै लागि फाइदाको कुरा हुनसक्छ ।
अहिले त देशका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले पत्रकारका संगठनलाई आफ्नो जनवर्गीय संगठन बनाउने होड मच्चाइरहेका छन् । त्यो स्वतन्त्र प्रेसमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र चुनौती हो । अनि, यो हाम्रो जस्तो पत्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले जोखिम देशका लागि खतरनाक कुरा हो । पत्रकार आचारसंहितामा पत्रकारले कुनै राजनीतिक संगठनको सदस्यता लिन हुँदैन भनिएको छ । तर, अधिकांश पत्रकारहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका सदस्य छन् । अझ, पत्रकारहरु विभिन्न दल र दलनिकटका संगठनहरुमा विविध पदमा बसी तिनै दलका कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै आसनग्रहण गर्न पुग्छन् । उस्तै परे उनीहरु नै स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा लाग्ने पत्रकारलाई हरेक प्रकारको असहयोग, अपमान र असुरक्षा सिर्जना गरेर हायलकायल पार्दै आफ्नो हालीमुहाली जमाउन पछि पर्दैनन् । यसमा उनीहरु गर्व गर्छन्, तर अन्ततः समाजले त्यसलाई सधैँ सहँदैन । सत्य सधैँ सत्य नै रहिरहन्छ, त्यस्ता गतिविधिहरुको पाठक, स्रोता र दर्शकले पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यी सबै अप्ठ्यारासँग जुधेर स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने हिम्मत गर्ने एक दर्जन मात्रै पत्रकार पनि गलत मनसाय बोकेकाहरुको विस्थापन गर्नमा अन्ततः सफल सावित हुन्छन् । यसबाट नेपालको पत्रकारितामा नयाँ तरंग पैदा हुनसक्छ ।
पत्रकारिताको विकल्प खोज्न हालका पत्रकारहरुलाई बाध्य नपार्न र थप व्यवस्थित पार्नका लागि सञ्चारसंस्थाको स्थापनामा कडाइ गर्नुका साथै पत्रकारितामा देखिएको पर्चाकारिताको अन्त्य गर्नैपर्छ । यसले मात्र सञ्चारगृहको गरिमा बढाउने छ । यसले मात्र सञ्चारगृहलाई सुधारगृह बन्नबाट रोक्नेछ । होइन भने, पत्रकारितालाई पेसा बनाएर यसलाई निरन्तरता दिने योग्य व्यक्तिको यस क्षेत्रमा सधैँ खडेरी परिरहने छ ।